China High chena lithopone BA311 fekitari uye vagadziri | Pairs Horse
Runhare: +86 316 7106119
Tsigiro & Sevhisi
Rutile titanium yakasviba 505
Yakachena kuchena lithopone BA311
Yakanaka kwazvo inorema calcium mota ...
1250 pajira riya vakanaka precipi ...
Yakachena chena Lithopone upfu BA311 rudzi rutsva rweasina-chepfu, asiri-anosvibisa girini yeLithopone poda, iyo ine hunhu hwekuchena kwepamusoro, simba rekuhwanda rakasimba, kupera, kupisa kwekudziya kwakanyanya uye yakasimba mamiriro ekunze kupfuura echinyakare lithopone.
1. Iko kushandiswa kwetopopone:
1.Ine yakanaka kupisa kupisa, inogona kugadzirisa mamiriro ekunze, kudzivirira algae, kudzikisa mutengo, uye ine yakachena kuchena ine yakanakisa yekuvanza simba.
2. Lithopone ine zvakawanda zvinoshandiswa kupfuura zinc sulfide. Zvakafanana nemamiriro ezinc sulfide, ine barium sulfate uye ine kusimba kuderera. Varombo chalking kuramba. Mutengo wacho wakachipa, saka unogona kutsiva titanium yakasviba.
3. Lithopone inogona kushandiswa kupenda pendi, ingi, rabha, nezvimwe.
White crystalline upfu. Iko musanganiswa we zinc sulfide uye barium sulfate. Iyo yakanyanya zinc sulfide, yakasimba simba rekuhwanda uye nekuwedzera mhando. Lithopone, inozivikanwawo se lithopone, ine huwandu hwe4.336 ～ 4.34 g / cm3 uye haina kunyungudika mumvura. Izvo zvinowora zviri nyore kuburitsa hydrogen sulfide gasi kana yaiswa kune acid, asi haishande kana yakafumurwa kune hydrogen sulfide uye alkaline mhinduro. Inoita kuchena kuchena kana ichionekwa kumwaranzi ye ultraviolet muzuva kwemaawa matanhatu kusvika kumanomwe, uye ichidzorera ruvara rwayo rwepakutanga ikaiswa munzvimbo ine rima. Zviri nyore kuti oxidize mumhepo, uye agglomerates uye kudzikira pashure kuva nyorova.
Sum zingi sulfide & barium sulfide,% (m / m)
Zingi oxide,% (m / m)
Zvinhu zvisina kugadzikana pa105 degrees,% (m / m)
Water soluble,% (m / m)
Masara pane iyo nesefa (63μm pajira riya),% (m / m)
Kukosha kwemafuta,% (g / 100g)
Tint yekudzora simba (ichienzaniswa neyero sampuli),%
Kuvanza simba (musiyano wechiyero)
Kwete isingasviki 5% (stansard sampuro)
Nzvimbo dzekushandisa: dzinoshandiswa zvakanyanya mukupfeka, hupfu, mapurasitiki, profiles, pendi, latex pendi, rabha, bepa uye dehwe.
Kurongedza: 25kg mapepa-epurasitiki mukomboni bhegi uye 500kg uye 1000kg tani mabhegi
Kutakura: Kana uchiisa uye uchiburitsa, ndapota takura uye uburitse zvishoma kuti udzivise kurongedza kusvibiswa uye kukuvara Chigadzirwa chinofanirwa kuchengetedzwa kubva kunaya uye nechiedza chezuva panguva yekufambisa.
Kuchengeta: Chengetera munzvimbo ine mweya uye yakaoma nzvimbo mumabatch. Kureba kwekukwirisa kwechigadzirwa hakufanirwe kudarika makumi maviri matanda. Izvo zvakanyatsorambidzwa kubata zvinhu izvo zvinoratidza chigadzirwa, uye teerera kune hunyoro.
Pashure: Akashambidzwa Kaolin
Zvadaro: Yakachena kuchena Lithopone BA312
China Lithopone Fekitori
Yakachena kuchena Lithopone BA312
Langfang Pairs Mabhiza Kemikari Co., Ltd.
gtag ('gadzira', 'AW-593496593');